ज्योति मगर कपडा फुकालेरै नांगै भएपछि…! – Sanghiya Online
ज्योति मगर कपडा फुकालेरै नांगै भएपछि…!
Posted on : April 23, 2017 - No Comment
काठमाण्डौ । ज्योति मगर नेपाली लोक संगीतमा बजार तताउने नाम,अझ भनौ लोक संगीतमा अङ्ग प्रहसनमार्फत चर्चित बनेकी गायिका हुन् । बिषेशगरि गीत संगीत भन्दा आफ्ना भित्रि ब्रसत र स्तन देखाएर आफुलाई नेपालमा नाम चलेकी गायिका बन्न सफल भएकी गायिका र मोडल समेत हुन् । केहि समय अगाडी भएको जंगल फेस्टिवलमा पनि उनको प्रस्तुतिको शैली पहिलेभन्दा फरक देखिएको थिएन ।
सधै उही ज्याकेट, उही गीत, उही छाडापन तर पनि उनको लागि माहोल अझै बढी रहेको र उनको माग पनि बढ्दै गहिरहेको देखिन्छ । छाडापन पनि यति भैसक्यो अब सायद लुकाउन पर्ने केहि छैन शनिबार जंगल फेस्टिबल पुगेकी ज्योति मगरले आफ्नो कामुकता प्रस्तुत गर्दै दर्शकको नजरमा जमी रहिन् ।
करिब १ घण्टा आफ्नो प्रस्तुतिमा उनको गीत सुन्न भन्दापनि अब उनले के हर्कत गर्छिन् भन्नेमा धेरैको चासो थियो । प्रस्तुतिको केहि समयमा उनले आफ्नो ज्याकेट खोलिन् र आफ्नो कामुकता देखाउन थालिन् ।
उनले प्रस्तुति गरिहँदा उनका स्तन राम्रैसंग देखिएको थियो भने उनि नाच्दै गर्दा उनको भित्रि कपडा पनि देखिन पुगेको थियो । केहि दर्शकहरु उनको प्रस्तुतिमा रमिरहेका थिए भने कोहि महोत्सबबाट बाहिर निस्केका थिए ।
यी महिला जसले प्रेमीको दबाबमा पोर्न फिल्ममा काम गरिन्
छैठों फ़िल्म महोत्सवमा गजमेरलाई लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार, विशेष अतिथिमा मुरलीधर
नेशनल मेडिकलका नर्सिङ्ग विद्यार्थीद्धारा चेतनामुलक सडक नाटक